Ellicott Dredge waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta Navigation Marina - Ellicott Dredges
Ellicott Dredge waxay gacan ka geysaneysaa hagaajinta Navigation Marina
Caado Ellicott 360SL lulid sallaan xaglo waxaa loo isticmaalaa dekedo yar yar iyo mashaariic marina oo ku taal Oregon. Mashaariicda qodista, oo ay fulineyso Oregon International Port of Coos Bay, waxay horumarin doontaa hagitaanka Charleston Marina Complex.
Qodista waxaa laga wadaa agagaarka Xarunta 'Point Adams Facility' iyo rugta shidaalka ee Russell Marine. Shaqadu waxay hubin doontaa marin u helida maraakiibta kalluumeysiga ganacsiga iyo madadaalada, waxaana la filayaa inay sii socoto illaa Diseembar.
Doomaha waxaa soo iibsaday Gobolka Oregon sanadkii 2015 si loogu wadaago isticmaalka dhowr bulsho xeebeed. Ellicott Dredges 'Rick Leverty, oo ah maamule sare oo dhanka adeega ah, ayaa sheegay in kuwa mas'uulka ka ah wadayaasha iyo dayactirka ay ku faraxsan yihiin caadada 360SL.
Taxanaha '360SL Swinging Dragon' ee loo yaqaan 'Swinging Dragon dredge' ayaa ah huur sallaan lulid la qaadan karo oo loogu talagalay in loogu shaqeeyo kanaallada cidhiidhiga ah iyo mashaariicda yaryar Qulqulkaan badan ayaa ku habboon mashaariicda dib u soo celinta ee ku lug leh marinas, harooyin, iyo mashaariic xasaasi ah oo deegaanka laga qodayo
Xigasho: Ellicott Dredge, Dredgingtoday.com